Kunyange hazvo hurumende iri kuti gadziriro yekuvhura zvikoro svondo rinouya iri kufamba zvakanaka, masangano ose anomirira varairidzi munyika anoti varairidzi havakwanisi kuenda kubasa svondo rinouya nekuti mari dzavo dzemihoro dzave shoma uye hurumende haisati yatora matanho anoita kuti varairidzi nevadzidzisi vasabatwe nedenda ranetsa reCOVID-19.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, vamiriri vemasangano ose mapfumbamwe anomirira varairidzi munyika, vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemihororo yavo pamwe nemashandiro avo.
Vataura vakamirira masangano ose anosanganisira Amalagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe,(ARTUZ) Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ZIMTA, Zimbabwe Rural Teachers Union neZimbabwe National Teachers Union, VaLadistous Zunde, vati varairidzi havakwanisi kuenda kubasa kana hurumende ikasavatambirisa mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora eku America vachiti iyi ndiyo mari inoita kuti murairidzi akwanise kurarama nemhuri yake.
Munyori mukuru weARTUZ, VaRobson Chere, vati nekuda kwaizvozvo hakwanisi kuenda kubasa kudzamara vapihwa mari dzavari kuda.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Teachers Union, VaEmmanuel Nyawo, vati kubatana kwaita masangano ose anomirira varairidzi munyika kunoratidza kuti varairidzi vaomerwa.
Masangano aya arambawo kuti ari kushanda nehurumende uye kuti pane mamiriyoni mazana matanhatu emadhora akaiswa parutivi nehurumende ekutenga zvekudzivirira kupararira kweCOVID-19 muzvikoro vachiti zvikoro zvave kunzi zvizvitengera maPPEs aya.
Munyori mukuru wePTUZ, VaRaymonda Majongwe, vatiwo humbowo hwavainawo hunoratidza kuti zvikoro zvizhinji munyika hazvina kugadzirira kuvhura svondo rinouya uye hapana chikonzero chekuti hurumende imhanye kuvhura zvikoro ichiisa hupenyu hwevana nevarairidzi munjodzi.
Varairidzi vari kudawo mari yekubatsirikana pakuzvidziriri kubva kuCOVID-19 kwete yavari kupihwa pari zvino madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica iyo isingatoreke kumabhanga.
Mukuru werimwe remasangano anomiririsa masangano evabereki muzvikoro, maSchool Development Associations, VaBanny Manokore, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvakavaomera varairidzi vanofara kuti hurumende yakati zvikoro zvivharwe.
VaManokore vanoti zvichemo zvevaraidzi zvinofanira kugadziriswa basa richifamba muzvikoro.
Hurumende yakatara kuti zvikoro zvivhurwe kuvana vanonyora bvunzo, dzeGrade 7, Form 4 neForm 6 asi varairidzi vanoti vana havana kudzidza kwenguva yakareba sezvo zvikoro zvakavharwa muna Kurume nekuda kweCOVID-19. Vanoti handi vana vese vaidzidza pamadandemutande nekudaro hapana chekumhanyira kunyoresa bvunzo.
Asi VaManokore vanoti nyaya yekuti bvunzo dzonyorwa riini inogona kugadziriswa vana vari muzvikoro.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvedzidzo yepasi, VaCaina Mathema, sezvo vange vasiri kudaira mhozhanhare yavo. Asi yava garoziva kuti VaMathema vanogara vakataura kuti havataure neStudio7
Hatinawo kukwanisawo kunzwa kubva kumunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana, sezvo vanga vasiriwo kudaira nhare mbozha yavo.